लघुबित्तको चर्को ब्याज र ऋणले बिपन्न परिवारमा आत्महत्याको बाटो ! « Pokhara Pati
लघुबित्तको चर्को ब्याज र ऋणले बिपन्न परिवारमा आत्महत्याको बाटो !
प्रकाशित मिति : २०७६ फाल्गुन ६, मंगलवार
काठमाडौं, ६ फागुन । बिरामी श्रीमान् राजो दासलाई बचाउन सिराहा नगरपालिका–२ की सनेचरी दासले लघुवित्तबाट ऋण लिइन् । श्रीमान् बचाउन सकिनन् । ऋण तिर्न नसक्दा १८ वर्षीय छोराले पनि आत्महत्या गरेका छन् ।
रामराजीदेवीकी देउरानी रेखाले पनि यस्तै पीडा सुनाइन् । ‘सात लाख ऋण लिँदा साहुले १६ धुर जग्गा रजिस्ट्रेसन गरेर लिए । तर, नौ लाख बुझाउँदासम्म पनि जग्गा फिर्ता गरेका छैनन्,’ रेखाले भनिन्, ‘१४ लाखको तमसुक बनाएको रहेछ । जग्गा माग्दा अदालतमा मुद्दा दियो । हामी गरिबले कसरी मुद्दा लड्ने ? हाम्रो घरबार सबै गइसक्यो ।’